‘नक्कली अडिटर’ पनि उम्किन पाउँदैनन् « Pahilo News
‘नक्कली अडिटर’ पनि उम्किन पाउँदैनन्
प्रकाशित मिति : 25 June, 2016 4:10 am
आसार ११ । नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने लेखा व्यवसायमा पनि नक्कलीहरुको बिगबिगी छ । प्रमाणपत्र नक्कली भएका ३७ जना डाक्टरलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले पक्राउ गरेपछि लेखापरीक्षण क्षेत्रमा सक्रिय भएका नक्कली अडिटरहरुलाई सीआइबीले कारवाही गर्छ कि गर्दैन भन्ने जिज्ञासा बढिरहेको छ । यस बिषयमा केही प्रहरीले के गर्छ त ? सीआइबीको नेतृत्व गरिरहेका डीआइजी नवराज सिलवालसँगको कुराकानीः
बजारमा नक्कली अडिटरका बारेमा खुब चर्चा छ, यसबारेमा तपाईंहरुलाई कत्तिको जानकारी छ ?
हामीले नक्कली डाक्टर र नक्कली पाइलटका विरुद्ध अपरेसन थालेपछि धेरै व्यक्ति र सम्बन्धित क्षेत्रका नियामक निकाय यस बिषयमा सतर्क भएका छन् । अहिले हामी नक्कली डाक्टरहरुको खोजीमा छौं । त्यसपछि नक्कली पाइलटविरुद्ध अपरेसन सुरु गर्छौं । नक्कलीहरुलाई छोड्ने कुरै छैन ।
त्यसो भए नक्कली अडिटरलाई कारवाही हुँदैन त ?
जनतामाथि बेइमानी गर्ने कसैलाई पनि प्रहरीले छोड्दैन । तर, अहिले हामी नक्कली डाक्टरहरु विरुद्धको अपरेसनमा छौं । जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नु जघन्य अपराध हो । हामी त्यही अपराध विरुद्धको अभियानमा छौं । अडिटरहरुलाई नियमन गर्ने निकायले पनि यस विषयमा सोच्नुपर्छ ।
नियमनकारी निकायको नेतृत्व नै कमजोर छ, केही काम नै गर्दैन भन्ने गुनासो छ । जनताले तपाईंहरुसँग भरोषा राखेका छन् नि?
हो । सीआइबीसँग जनताको ठूलो आश छ । हामी अहिले नक्कली डाक्टरहरुविरुद्धको अपरेशनमा छौं भन्नुको अर्थ अरु नक्कलीहरुलाई कारवाही गरिँदैन भन्न खोजेको होइन । तर, अहिले हामी नक्कली डाक्टर खोज्नमै ब्यस्त भएकाले नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले यस बिषयमा सोचिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो ।
कतिपय अडिटरको प्रमाणपत्र नै नक्कली छ भन्ने सुनिएको छ नि?
नक्कली प्रमाणपत्र हुने कसैलाई पनि प्रहरीले छोड्दैन । विस्तारै समय आउँछ । जनतामाथि बेइमानी गर्ने जो कोहीलाई पनि कार्वाही हुन्छ । कोको अडिटर त्यस्ता छन्, तपाईं सञ्चारकर्मीहरुले यसबारे दिने सानो सुचना महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नक्कली अडिटरका विरुद्धमा प्रहरीमा परेका उजुरी चाहिं के हुन्छ ?
यसका प्रक्रियाहरु छन् । प्रहरीले आफ्नो काम गर्छ । हामी नक्कली डाक्टर र पाइलटहरु खोज्दैछौं । यो बेला अरु नक्कलीहरुलाई नियमनकारी निकाय वा सरकारले खोजिदिए हामी हाम्रो मिसनमा अझै सफल हुन सक्छौं । प्रहरीले अपराध गर्ने जो कोहीविरुद्ध ढिलो चाँडो अपरेसन त थाल्छ नै !